Iifoto zeSpanish Chema Madoz eziza kukwenza ujonge kabini | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifoto zeSpanish Chema Madoz eziza kwenza ukuba ujonge kabini
UYesu Arjona Montalvo | | Ukufota, Ukuphefumlelwa
UJose Maria Rodriguez Madoz okanye yaziwa ngcono njenge Chema Madoz owazalwa ngo-1958, eMadrid, ngumfoti odumileyo waseSpain owaphumelela ngo-2000 'Ibhaso leSizwe lokufota'. Unemiboniso emininzi, eSpain nakwamanye amazwe, nakwakhe Umsebenzi omnyama kunye nomhlophe wokufota. Umsebenzi wakhe uqokelela imifanekiso ethathwe kwimidlalo yobuchule yokucinga.
UMadoz Uyaziwa xa ethetha ngenjongo yepeyinti yakhe:
Inyani yile, andazi ukuba bazakuphendula njani okanye yintoni eza kucaphukisa umbukeli, utshilo uMozzo. Ndijonge imifanekiso eshukumayo kwaye indizalise, endenza ndizive ngathi ndenza into eyahlukileyo. Ndifuna ukukwazi ukuba phambi kweefoto zam kwaye ndizive ndinokwazi ukunxibelelana nazo. Ukuba umfanekiso uthetha into kum, ndiqinisekile ukuba banokubakho nabanye abantu abaza kuva into efanayo, okanye into efanayo.
Chema Madoz isebenza kuphela iifoto zakho kwi Mnyama nomhlophe njenge chasa ying ne yang yezinto azifotayo. Izinto ezithatha idrama ye-surreal kunye ne-minimalist ekukhethwa kuyo kuphela ukuba iboniswe kwihlabathi liMnyama noMhlophe.
Ndisebenzisa abamnyama nabamhlophe ngezizathu ezahlukeneyo. Eyokuqala kukunciphisa umthambo, kuba uthintela umbala kwizinto ezimbini ozijongileyo, into eyenzekayo nezinto (ngokubanzi zizinto ezimbini ezichaseneyo). Kwaye kwelinye icala, yenza ukuba kube lula ukudlala ngezinto ezifakwayo xa kusekwa amakhonkco okanye amakhonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Iifoto zeSpanish Chema Madoz eziza kwenza ukuba ujonge kabini
Imibala ecacileyo yeViktoria Kravchenko